Nampihomehy Ny Masedoniana ny Fitavozavozan’ny Filohany Taminà Resadresaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2014 22:42 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, русский, Español, বাংলা, English
Herinandro mialoha ny fifidianana any Masedonia, niteraka adihevitra be tamin'ny mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy Masedoniana ny fitavozavozan'i Gjorge Ivanov, Filoha amperin'asa no sady mpifaninana ho fidiana ho filoha, tamin'ny resadresaka voalohany nataony tamin'ny fampielezan-kevitra.
Naparitaky ny vavahadim-baovao Masedoniana A1on.mk ny ampahan-dresadresaka tao amin'ny fahitalavitra nitenenana ity fanambarana ity :
Lazain'i Ivanov fa lehibe lavitra noho Eoropa mitambatra i Kazaksthan amin'ny fangalàny ho ohatra ny masoivoho Masedoniana vao nosokafana any:
Ny fanombohan'i #Хорхе mandà fanasàna. Hitako eto fa hisy toerana banga ao amin'ny ‘studio’ http://t.co/AIzDm1P4ub Na hisy ny [ seza foana] na izany na tsy izany.
Notsindrian'ny tranonkala Libertas fa ora maromaro taorian'ny fanombohan'ny adihevitra amin'ny aterineto ny amin'ny fahitàna ny fitavozavozan'i Ivanov tamin'ny fahitalavitra dia novonoina tao amin'ny YouTube ireo lahatsary maro mikasika izany. Taorian'ny namonoana ireo lahatsary sasany dia nampitahain'ireo mpisera amin'ny Twitter i Ivanov sy Recep Tayyib Erdoğan, Praiminisitra Tiorka izay niatrika kiana ihany koa tamin'ny nisakanany ny tranonkalan'ny haino aman-jery sosialy tamin'ny volana Martsa 2014.
Hitako omaly fa novonoina ilay lahatsary izay nilazan'i Ivanov fa Chirac no filohan'i Etazonia. Aza adino fa miaraka amin'i Erdoğan ny fon'i #Хорхе.
Fampandrosoana 5 ora izay
Hevitra 4 andro izay